दुब्लो, पातलो हुनुहुन्छ ? यी चीज खानुस् ५ दिनमा हुन्छ चमत्कार ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > दुब्लो, पातलो हुनुहुन्छ ? यी चीज खानुस् ५ दिनमा हुन्छ चमत्कार !
हेटाैडाबाट आयो २ वटै बस ठोक्किएर यात्रुकाे मृत्युकाे दुःखद खबर
विमानभित्र प्रेममा लिप्त जोडीको व्यवहारले अन्य यात्री असहज भएपछि एयर होस्टेसले लगाइन यस्तो आइडिया